Allaybaday - Wikipedia
Allaybaday waa magaalo ku taalo galbeedka Somaliland, waxay u dhowdahay caasimada Somaliland Ee Hargeysa oo qiyaas ahaana u jirtaa 60km. Allaybaday waxa ay hoos tagtaa Gobolka Gabiley, waxaana ay ka midtahay saddexda magaalo ee ugu waaweyn gobolkaas oo kala ah Gabiley, Wajaale iyo Arabsiyo. Degmadda Allaybaday waxay u dhaxeysaa xad ahaan magaalooyinka Wajaale iyo Faraweyne oo ka tirsan gobolka Maroodijeex. Degmada Waxaa ay xada la leedahay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya halkaasi oo ay xad kale la leedahay magaalada Harta Sheekha.
Allaybaday waxa degmo ahaan loo magacaabay sanadkii 2002dii bishii 2aad 12keedii. Iyada oo uu magacaabay madaxweyne Maxamed X, Ibrahim Cigaal AHUN.
Degmada Allaybaday waa degmo aad u balaadhan taariikh weyna ku leh halgankii dub u xoraynta jamhuuriyadda Somaliland.
Allaybaday waa magaalo qadiimiya waxayna ku taala xadka udhaxeeya somaliland iyo itoobiya. Degmadda Allaybaday waxaa hoostaga ku dhawaad 18 tuulo oo ka bilaabato duleedka degmada Arabsiyo Ee Geesdheere Ilaa laga Gaadho xuduudka dawlad Deegaanka Soomalida oo ay magaaladu xuduud la leedahay Isla markaana Laba Degmood u kala qaybiya. Tuulooyinka ugu caansan ee degmaddu maamusho waxaa ka mid Xidhinta, Waalidxoor, Harcadaad, Geedabeera iyo IKK.
Degmadda Allaybaday waxay hodan ku tahay wax soosaarta dalaga beeraha oo ay ugu weyn tahay Galleyda iti Hadhuudhka Iyana waxaan ka madhnayn khudaarta noocyadeeda kala duwan oo badi la baxda sida Xabcabka, Basasha, Tamaandhada, Dabacasaha, Saladhka, Kaabajka, Baytaraafka, Qajida, Sinsinta, Bunka iyo Badi Khudraha dadku manaafacaadsadaan. Degmadda sidoo kale dhaqaalaheedu wuxuu ku tiirsan yahay narka laga yimaado khudaarta dhanka Xoolaha.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Allaybaday&oldid=208878"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 25 Jannaayo 2021, marka ee eheed 23:04.